IHE NIILE Ị CHỌRỌ ỊMA MAKA GAM AKPORO GO - NKE KACHA MMA - 2019
MySQL bụ usoro njikwa nchekwa data jikwa ụwa dum. Ọtụtụ mgbe a na-eji ya na mmepe weebụ. Ọ bụrụ na eji Ubuntu dị ka isi sistemụ arụmọrụ (OS) na kọmputa gị, mgbe ahụ ịwụnye ngwanrọ a nwere ike isi ike dịka ị ga-arụ ọrụ "Njedebe"site n'ịme ọtụtụ iwu. Ma n'okpuru a ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu esi arụnye MySQL na Ubuntu.
Hụkwa: Otu esi esi wụnye Linux site na windo mbanye
Ịnye MySQL na Ubuntu
Dịka e kwuru, ịbịnye usoro MySQL na Ubuntu os abụghị ọrụ dị mfe, ma ịmara iwu niile dị mkpa, ọbụna onye ọrụ nkịtị nwere ike ijikwa ya.
Rịba ama: niile iwu ndị a ga-edepụta n'isiokwu a ga-egbu ya na ikike oke. Ya mere, mgbe ị banyere ha ma na ịpị bọtịnụ Tinye, a ga-ajụ gị maka paswọọdụ ị kwuru mgbe ị wụnye os. Rịba ama na mgbe ị na-abanye na paswọọdụ, adighi egosi ihe odide ahụ, ya mere, ị ga-etinye ụdị nchịkọta ziri ezi na pịa Tinye.
Nzọụkwụ 1: Melite sistemụ arụmọrụ
Tupu ịmalite ntinye nke MySQL, ọ dị oke mkpa ịlele maka mmelite nke OS gị, ma ọ bụrụ na e nwere, tinyezie ha.
Iji malite, melite niile nchekwa site na-agba ọsọ "Njedebe" na-eso iwu:
ndozi apt update
Ugbu a, anyị ga-wụnye mmelite ahụ achọtara:
Chere maka usoro nbudata na ntinye iji mezue, wee regharịa usoro. Ị nwere ike ime nke a n'enweghị ahapụ "Njedebe":
Mgbe ịmalitere usoro ahụ, banye ọzọ "Njedebe" ma gaa nzọụkwụ ọzọ.
Hụkwa: A na - ejikwa iwu na Linux nkwụsị
Ugbu a, anyị ga-arụnye ihe nkesa MySQL site na iji iwu ndị a:
sudo apt wụnye mysql-server
Mgbe a jụrụ ya: "Ị chọrọ ịga n'ihu?" tinye agwa "D" ma ọ bụ "Y" (dabere na ọnọdụ OS) wee pịa Tinye.
N'oge echichi ahụ, interface ga-apụta, na-arịọ gị ka ịtọ ntọala mgbọrọgwụ ọhụrụ maka ihe nkesa MySQL - tinye ya wee pịa "OK". Mgbe nke ahụ gasịrị, kwenye paswọọdụ ịbanye na pịa ọzọ. "OK".
Rịba ama: na interface pseudo-graphic, ịgbanwee n'etiti ebe ọrụ na-eme site na ịpị igodo TAB.
Mgbe ị debere paswọọdụ, ị ga-echere ruo mgbe echichi nke ihe nkesa MySQL ka agwụcha ma wụnye ya ahịa. Iji mee nke a, na-agbaso iwu a:
sudo apt wụnye mysql-client
N'oge a, ịkwesighi ikwenye ihe ọ bụla, ya mere mgbe usoro ahụ gasịrị, e nwere ike ịchọta nke MySQL zuru ezu.
N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu na itinye MySQL na Ubuntu abụghị usoro mgbagwoju anya, karịsịa ma ọ bụrụ na ị maara iwu niile dị mkpa. Ozugbo ị gafere nzọụkwụ niile, ị ga-enweta ozugbo na nchekwa data gị ma nwee ike ịgbanwe ya.